Ihe ị ga -eme na Kildare
Kildare nwere ike ịbụ otu n'ime ógbè ndị pere mpe na Ireland mana o juputara na ihe inyocha na ịchọpụta - n'eziokwu, enwere ọtụtụ ihe ịhụ ma mee nke na ọ ga -esiri ike ịfanye ya n'otu ezumike!
Kildare bụ ebe amụrụ Arthur Guinness na Ernest Shackleton, mana ịlaghachi azụ, Kildare bụ ụlọ St Brigid, otu n'ime ndị nsọ atọ na -akwado Ireland. Cill Dara, nke pụtara "ụka nke osisi oak", bụ aha Irish maka Kildare, yana aha maka ebe obibi ndị mọnk nke St Brigid hiwere, nke ghọrọ ebe dị mkpa maka Iso Christianityzọ Kraịst mbụ na Ireland.
Site na oke akụkọ ihe mere eme a, nke ọgbara ọhụrụ na nke ochie, ọ bụghị ihe ijuanya na akụkọ ihe mere eme na ihe nketa gbara gị gburugburu ebe ọ bụla ị na -aga na Co. Kildare - obi Irland East Oge Ochie.
Useslọ & Ubi
Na-eje ije & Hiking
Nature & Anụ ọhịa